प्रेमको प्रतीक रातो गुलाबः आज प्रणय दिवस (विशेष सामाग्री )
किन मनाइन्छ प्रणय दिवस ? के हो यसको महत्व ?
प्रकासित मिति : २०७३ फाल्गुन ३, मंगलवार प्रकासित समय : १०:३८
काठमाडौँ, फागुन ३ । फेब्रुअरी १४ अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे । नेपालमा पनि बढ्दो उमेरका युवा युवतीहरुले सम्बन्ध दिवस तथा प्रणय दिवसका रुपमा आजको दिनलुाई मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको देखिन्छ ।
आजको दिन मन पराइएको मानिसलाई मनको कुरा भन्ने उपयुक्त अवसरका रुपमा समेत युवापंक्तिहरुले लिने गर्दछन । वास्तवमा माया र प्रेमले रंगिएको मनबाट कहिले काही दोहोरो संवाद गर्न नसक्दा साँचो माया गर्ने मानिसहरुले पनि असफलता बेहोर्नुपर्छ, तसर्थ आजको दिन साचो माया गर्नेहरुको लागि विशेष र उत्कृष्ट दिन पनि हो ।
आफुले मन पराएको मानिसलाई मनमा भएको भावनाहरु भन्न नसक्दा वा रिसाउने र नराम्रो सोच्ने हो कि भनेर डराउदा कतिपय मानिसहरु अन्तरनिहीत समस्यामा परेका हुन्छन । उनीहरुले आजको दिनको महत्वलाई बुझेर सभ्यतापूर्वक मनको प्रस्ताव पेश गर्ने योजना समेत बनाएका हुन्छन । तयर्थ युवा युवताीहरुलाई पहिलो प्रेम प्रस्ताव राख्ने तथा प्रेम सम्बन्धमा भएकाहरुलाई अझै दरिलो सम्बन्धको सुरुवात गर्ने अवसरका रुपमा आजको दिनलाई मनाउने गरिन्छ ।
सामान्यतया आजको दिन सम्मानपूर्वक प्रेम प्रस्ताव राख्दा गालि वा अन्य डरको अवस्था रहदैन । आजको दिन सभ्यतापूवक प्रेम प्रस्ताब राख्नका लागि एक खालको अनुमति हुन्छ । तर युवा,युवतीहरुले सम्बन्धीत मानिसको भावना र चाहनाको सम्मान गर्नु पर्दछ । प्रेम दिवसको नाममा अर्काको भावना विपरित भने मनमर्जि बोल्ने काम गर्नु उचित मानिदैन ।
युवा पुस्तामा आजको दिनलाई प्रस्ताब राख्ने दिनको रुपमा कुरेर बस्ने गरिएको पनि देखिन्छ, तर कतिपय अवस्थामा सम्बन्धीत मानिसको इच्छालाई नबुझ्दा तनाब र कतिपय अवस्थामा घटनाहरु समेत हुने गरेका छन । तसर्थ साचो माया गर्नेहरुले आफुले माया गर्ने मानिसलाई असर नपर्ने गरी अनी अनुमति लिएर, सम्मानपूर्वक यो पर्वलाई मनाउन सकेको खण्डमा यसको महिमा बढ्छ । वास्तवमा त्यसरी मात्र यो पर्वको सदुपयोग हुन सक्ने देखिन्छ ।
प्रेम दिवसको अवसरमा युवा,युवतीहरु घुम्न जाने,पार्टी गर्ने र रमाउने प्रचलन शहर बजारमा अलि बढिनै रहेको देखिन्छ । माया र प्रेम बढाउने आजको दिनलाई कतिपय अवस्थामा युवाहरुले उचितसँग मनाउन नजान्दा समस्याहरु पनि आउने गरेका छन । पर्वको नाममा यसको दुरुपयोग हुने क्रम पनि बढेको देखिन्छ, त्यसमा आजका युवापुस्त सजग हुन जरुरी छ ।
प्रेममय बन्दै काठमाडौं
काठमाडौं लगाएत पोखरा,बुटबल,धरान,नेपालगंज,सुर्खेत लगाएतका मुख्य शहरहरुमा युवा युवतीहरु विभिन्न खालका उपहारको किन बेचमा बेस्त रहेको छन । आजको दिन गुलाफ लगाएत आफ्नो प्रियजनलाई मनपर्ने बस्तुहरु उपहार दिने प्रचलन रहेको छ । आजको दिनन देशैभरीका बजारहरु प्रेममय बनेको देखिन्छ । जताकतै गुलाफ अनि राम्रा राम्रा गिफ्ट आइटमहरुको किनबेच, हजारै जोडिहरुको भिडभाडले बजारलाई आजको दिन प्रेममय बनाएको महसूस हुन्छ ।
काठमाडौ लगाएत देशका मुख्य शहरहरुमा गिफ्ट सप र फ्लावर सप भ्यालेन्टाइन डेका लागि प्रेम अङ्कित सामग्रीले पूरै सिँगारिएका छन् । तारे होटल, रेस्टुराँ प्रेममय बनाएर सिँगारिएका छन् भने सिनेमा हलमा पनि युवक÷युवतीको अरू बेलाभन्दा बढी नै चाप देखिन्छ । राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पार्कहरुमा पनि तेत्तीकै भिडभाड रहेको छ ।
प्रेमको प्रतिक रातो गुलाब
प्रेमको प्रतीक मानिने रेड रोज अर्थात् रातो गुलाब । ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे’, ‘आइ लभ यु’ भन्नलाई यही रातो गुलाबको आज अत्याधिक प्रयोग गर्ने गरिन्छ ,जुन भावना शब्दमार्फत व्यक्त गर्न वर्षौंसम्म सकिएको हुदैन त्यो आजको दिन दिइने एउटा गुलाबको फूलले काफी अर्थ राख्छ ।
यस अवसरमा रातो गुलाफ तथा ‘आई लभ यु’ लेखिएको विभिन्न उपहार पोस्टकार्ड, पुतली, प्रेम अङ्कित कप, खेलौना, गिफ्ट बास्केट, परफ्युम, चकलेट जस्ता सामानको समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ तथापि रातो गुलाप नै आजको विशेष उपहार युवाहरुले मान्ने गरेका छन । प्रेमको पर्व आफैँमा सुखद क्षण बनेर आउँछ तर यस दिन गरिने प्रेमप्रस्तावको शैली शिष्ट भने हुनुपर्छ नभए यसको दुरुपयोग मानिन्छ ।
भ्यालेन्टाइन डेको सुरुवात सन् २६९ मा रोमनबाट शुरू भएको मानिन्छ । तेस्रो शताब्दीका रोमन शासक सम्राट क्लाउडियस दोस्रोका पालामा देशवासीलाई सैन्य भर्तीका लागि उर्दी जारी भयो । नारीसँगको सम्बन्धका कारण सैनिक कमजोर हुने ठहर गर्दै सम्राट्ले प्रेम र विवाहमा रोक लगाए । तर रोममा भ्यालेन्टाइन नाम गरेका पादरीले सम्राटको त्यस अभियानलाई सार्वजनिक रूपमै उल्लङ्घन गर्ने घोषणा गरे र थुप्रै सैनिकलाई वैवाहिक सूत्रमा बाँधिदिए ।
आफ्नै अभियानविरुद्घ गतिविधि सह्य नभएपछि सम्राटले पादरीलाई पक्राउ गरी मृत्युदण्डको सजायँ दिए । भ्यालेन्टाइन पादरी जेलमा छँदा जेलरकी छोरी नै भेट्न आइरहन्थिन् । मृत्युदण्ड पाउनु केही दिनअघि ‘लब फ्रम योर भ्यालेन्टाइन’ भनी हस्ताक्षर गरेको प्रेमपत्र पादरीले आफ्नी प्रेमिका अर्थात् जेलरकी छोरीलाई थमाए ।
भ्यालेन्टाइनलाई सन् २६९ को फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन मृत्युदण्ड दिइयो । प्रेमका लागि भ्यालेन्टाइनको यही बलिदानको सम्मानमा फेब्रुअरी १४ लाई भ्यालेन्टाइन डेका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
आजका युवाहरुले उक्त दिनको अर्थ र महिमालाई नबुझि छाडा प्रवृती अंगाल्दा यसको दुरुपयोग समेत भएको देखिन्छ । प्रेम दिवस वास्तवमा चोखो माया गर्ने पवित्र मन भएकाहरुको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण दिनको रुपमा लिन सकिन्छ । सभ्य र भव्य रुपले प्रेम दिवस मनाउने प्रचलन बढोस । हरपल नेपाल आम पाठक,लेखक, हाम्रा सुभेच्छुक,सुभचिन्तक र सबै सबैमा हार्दिक शुभकामन पनि व्यक्त गर्दछ ।